भ्रष्टाचार: आपराधिक गतिविधि वा बेइमानीको एक रूप – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
भ्रष्टाचार: आपराधिक गतिविधि वा बेइमानीको एक रूप
By Digital Khabar Last updated Nov 21, 2020 35 0
०६ मंसीर, काठमाडौँ । भ्रष्टाचार भनेको आपराधिक गतिविधि वा बेइमानीको एक रूप हो। यो एक व्यक्ति वा एक समूह द्वारा एक दुष्ट कार्य को सन्दर्भमा। सब भन्दा उल्लेखनीय, यो कार्य अरूको अधिकार र सुविधाहरू सम्झौता। यसका साथै भ्रष्टाचारले मुख्यतया घूसखोरी वा अपहरण जस्ता गतिविधिहरू समावेश गर्दछ। यद्यपि भ्रष्टाचार धेरै हिसाबले हुन्छ।
सम्भवतः, अख्तियारका पदहरूमा मानिसहरू भ्रष्टाचार गर्न अति संवेदनशील हुन्छन्। भ्रष्टाचार पक्कै पनि लोभी र स्वार्थी व्यवहार झल्काउँछ।
सबै भन्दा पहिले, घूस भ्रष्टाचार को सबै भन्दा साधारण तरीका हो। घूसखोरीमा व्यक्तिगत लाभको लागि बदली अनुमोदन र उपहारको अनुचित प्रयोग समावेश छ। यसका अतिरिक्त पक्षका प्रकारहरू विविध छन्। सबै भन्दा माथि, इष्टहरूमा पैसा, उपहार, कम्पनी सेयर, यौन पक्ष, रोजगारी, मनोरन्जन, र राजनीतिक सुविधाहरू समावेश छन्। साथै, व्यक्तिगत लाभ हुन सक्छ ( तरजीही उपचार दिने र अपराध अनदेखी।
अपहरण चोरीको उद्देश्यको लागि सम्पत्ति रोक्ने कार्यलाई जनाउँछ। यसका साथै, यो एक वा धेरै व्यक्तिहरू द्वारा लिइन्छ जुन यी सम्पत्तिहरूसँग सुम्पिएको थियो। सबै भन्दा माथि, गबन एक प्रकारको वित्तीय ठगी हो।
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारको एक वैश्विक रूप हो।
सब भन्दा उल्लेखनीय, यो एक निजी राजनीतिज्ञ को अधिकार को अवैध लाभ को उपयोग को लागी दर्ता गर्दछ। यसका साथै, भ्रष्टाचारको लागि लोकप्रिय तरिकाले राजनीतिज्ञहरूको फाइदाको लागि सार्वजनिक कोषलाई गलत दिशामा डोर्याइरहेको छ।
जबरजस्ती भ्रष्टाचारको अर्को प्रमुख विधि हो। यसको अर्थ सम्पत्ति, पैसा वा सेवाहरू अवैध रूपमा प्राप्त गर्नु हो। सबै भन्दा माथि, यो उपलब्धि व्यक्ति वा संगठन जबरजस्ती द्वारा लिन्छ। यसैले एक्स्टोरेशन ब्ल्याकमेलसँग मिल्दोजुल्दो छ।
मनपर्ने र भतीजावाद भ्रष्टाचारको एकदम पुरानो रूप हो जुन अझै प्रयोगमा छ। यो एक व्यक्ति को सन्दर्भ छ एक व्यक्ति को आफ्नै नातेदार र साथीहरुलाई काम लाई मन पराउने। यो पक्कै पनि एक धेरै अन्यायपूर्ण अभ्यास हो। यो किनभने धेरै योग्य उम्मेदवारहरू काम पाउन असफल हुन्छन्।
विवेकको दुरुपयोग भ्रष्टाचारको अर्को विधि हो। यहाँ, एक व्यक्ति को एक को शक्ति र अधिकार दुरुपयोग। उदाहरण एक न्यायाधीश अन्यायपूर्वक अपराधिकको केस खारेज गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, प्रभाव प्याडलिंग यहाँ अन्तिम विधि हो। यसले सरकार वा अन्य अधिकृत व्यक्तिहरूको साथ अवैध रूपमा एकको प्रभाव प्रयोग गर्न सन्दर्भ गर्दछ। यसबाहेक, यो अधिमान्य उपचार वा पक्ष प्राप्त गर्न क्रम मा लिन्छ।
भ्रष्टाचार रोक्ने तरिकाहरू
भ्रष्टाचार रोक्नको एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका सरकारी काममा राम्रो तलब दिनु हो। धेरै सरकारी कर्मचारीहरूले धेरै कम तलब पाउँछन्। तसर्थ, उनीहरू खर्च खर्च गर्न घूस लिन्छन्। त्यसो भए सरकारी कर्मचारीले बढी तलब पाउनु पर्छ। फलस्वरूप, उच्च तलबले उनीहरूको उत्प्रेरणा र घुसखोरीमा संलग्न हुने संकल्प कम गर्दछ।
भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कडा कानूनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सबैभन्दा माथि, कठोर व्यक्तिलाई कडा सजाय दिइनु पर्छ। यसबाहेक, कडा कानून को एक कुशल र द्रुत कार्यान्वयन हुनु पर्छ। कार्यस्थलहरूमा क्यामेरा लागू गर्नु भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उत्तम तरिका हो। सबैभन्दा माथि, धेरै व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने डरले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनबाट टाढा रहनेछन्।
यसका अतिरिक्त यी व्यक्तिहरू अन्यथा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने थिए। सरकारले मुद्रास्फीति कम राख्न निश्चित गर्नुपर्दछ। मूल्य बढेको कारण धेरै मानिसहरुका आयहरु एकदम कम छ जस्तो लाग्छ। फलतः यसले जनतामा भ्रष्टाचार बढाउँदछ। व्यापारीहरूले उच्च वस्तुहरूमा उनीहरूको सामानहरू बेच्न मूल्यहरू बढाउँछन्। यसबाहेक, राजनीतिज्ञले उनीहरूको फाइदाहरूका कारण समर्थन गर्दछन्।
सारांशमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार भनेको समाजको एक ठूलो दुष्टता हो। यस दुष्टलाई चाँडै समाजबाट हटाउनुपर्दछ। भ्रष्टाचार भनेको विष हो जुन आजका दिन धेरै व्यक्तिको मनमा घुसेको छ। आशा छ, लगातार राजनीतिक र सामाजिक प्रयासको साथ हामी भ्रष्टाचारबाट छुटकारा पाउन सक्छौं।
भारतकाे प्रयागराजमा रक्सी पिउँदा ५ जनाको मृत्यु
एम्बाप्पेको दुई गोल खेर जादाँ पीएसजीको विजयी यात्रा टुङ्गियो
मनकारी मनद्वारा आग्लागी पिडित प्रति आर्थीक सहयोग
आगलागी पिडितहरुकाे लागि नेपाली काँग्रेस पाँचपाेखरी थाङ्पाल-५ इकाई समितिद्वारा सहयोग
पत्रकारको ‘बार्गेनिङ’ अडियो बाहिरियो !
नेपाल टेलिकमले नागरीक माथि गरेकाे छलकपट
आनुवंशिक संरचना अध्ययनको निष्कर्ष, ‘नेपालमा फैलिएको…
ताप्लेजुङमा समुदायमै फैलियो कोरोना
कोरोनाबाट मर्नेको संख्या १४ सय नाध्यो
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १६ सय १४ कोरोना संक्रमित, २३ को…
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान ऐरीसहित तीन खेलाडीलाई…
कोभिड अपडेट : एक हजार ९४८ जना सङ्क्रमित थपिए
कोरोना बीमा रकम मन्त्री भट्टराईद्वारा सर्वसाधारणका लागि…
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि परीक्षण गरिरहेका…
प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई सन्देश : ‘सीमा समस्या वार्ताबाट…
देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाउन शुरु
‘प्रचण्ड पार्टीमा बस्न मिल्दैन’: सुर्य थापा
एकादशीको अवसरमा बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा भक्तजनहरुकाे भिड
महासङ्घको वार्षिक साधारणसभा शुरुः देशभित्रै लगानी गर्न निजी…
Prev Next 1 of 1,308
११ मंसिर २०७७, बिहीबार २१:१९
११ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:५७
११ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:२७
Culture & Religious
Todays Newspaper Headlines